Phendula: Shintsha Ukuzibandakanya Kwakho Kokuthengisa Nge-LinkedIn Search ye-imeyili Nokufinyelela | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 5, 2020 NgoLwesine, Novemba 5, 2020 Douglas Karr
Akekho ongakuphikisa lokho LinkedIn iyinkundla ephelele kunazo zonke yokuxhumana nabantu esekwe ebhizinisini emhlabeni. Eqinisweni, angizange ngibheke i-resume enamathiselwe yalowo ozongenela ukhetho noma ngivuselele i-resume yami eminyakeni eyishumi selokhu ngasebenzisa i-LinkedIn. I-LinkedIn ayigcini nje ngokungivumela ukuthi ngibone konke okwenziwa yikhasimu, kepha futhi ngingacwaninga inethiwekhi yalowo ozobhapathizwa futhi ngibone ukuthi basebenze nobani futhi - bese ngixhumana nalabo bantu ukuthola okwengeziwe.
Vele, akuyona nje insiza yalabo abafuna umsebenzi noma osonkontileka… futhi iyi-database ephelele kunazo zonke emhlabeni yabalingani bezimayini namathemba futhi, ikakhulukazi uma usebenzisa Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti Isu.
Phendula Ukuzibandakanya Kokuthengisa
Phendula iyisiteshi semigudu eminingi ipulatifomu yokubandakanya abathengisi lokho kwenza ukufinyelela kwe-imeyili komuntu siqu, izingcingo, nemisebenzi, ngenkathi i-Sales ingagxila kulokho okubaluleke kakhulu - ukuvalwa kwamadili Nayi ividiyo yokubuka konke enhle:
Izici zokuphendula zifaka
Phendula ikwenza ukwazi ukuthola amathemba ekhwalithi yemikhankaso yakho yokufinyelela ye-LinkedIn evela kwaSalesforce, I-Hubspot, ICopper CRM, kanye nenqwaba yabahlinzeki bemininingwane ngokuhlanganiswa kwendabuko nezinsizakalo ezivela eceleni.
I-LinkedIn Chrome Extension - Thola ama-imeyili ebhizinisi amathemba ku-LinkedIn futhi uqinise umkhiqizo wakho ngePhendula i-Chrome Extension. Imisebenzi yakho yansuku zonke kanye nekhono lokuxhuma nge-LinkedIn, ama-imeyili nezwi kuhlala kufinyeleleka.
Ukulandelana Kokuthengisa KweMultichannel - Bandakanya ngamathemba akho ngeziteshi eziningi - thumela ama-imeyili akho nokulandelela, shaya izingcingo, ufeze imisebenzi yansuku zonke, xhuma futhi ufinyelele amathemba akho ngokuzenzakalela ku-LinkedIn.
Ukukhiqiza Komkhiqizo - Ramp up umkhiqizo wakho ngemisebenzi yansuku zonke kanye nekhono lokuxhuma nge-LinkedIn, i-imeyili, izwi, kanye nomphakathi. Umsebenzi weLog, bese uxhuma ngokwendabuko ku-CRM yakho, iZapier, noma ngokuhlanganiswa kwe-API.
Ukuphathwa Kokuxhumana Nokuthengisa - Phatha abazoba ngamakhasimende kalula - hlukanisa amathemba akho ngokuya ngezinqubo eziningi zokugcina ukufinyelela kwakho kuhlelekile. Ngenisa noma engeza oxhumana nabo, oxhumana nabo bengxenye, oxhumana nabo bokuhlunga, ubuyekeze umlando wokulandelana kwabo nomsebenzi wabo, kanye nokufakwa ohlwini lokuvinjelwa kwezizinda noxhumana nabo.
Izingcingo ze-Cloud Cloud - Xhuma ngethemba lakho ocingweni ngqo kusuka ku-akhawunti yakho yokuphendula nokwandiswa kwe-Chrome. Sebenzisa izwi ekuxhumaneni kwakho nokuthengisa ngama-Cloud Calls.
Izici Zokuthengisa Ezihlakaniphile - Izici ezisekelwa nge-AI Phendula i-AI ukuze uhlanganyele namathemba akho kangcono futhi ngokushesha - kufaka phakathi ukuhlukaniswa ngemeyili kwebhokisi lokungenayo, isheke lekhwalithi, neziphakamiso, izenzo eziphakanyisiwe nezingcingo eziphakanyisiwe zamathemba ashisayo.
I-Edition Team Edition - Hlanganyela emikhankasweni namathemba, lawula amalungu eqembu, wabelane ngamathempulethi we-imeyili nomkhankaso, ulandele ukusebenza kwethimba nokuningi nge-Reply Team Edition.
Imibiko Yokuthengisa Nezibalo - Landelela inqubekela phambili yakho yokulandelana bese uhlaziya imiphumela yethimba lakho ngokubika okuningiliziwe kokuPhendula ngokulandelana, imiphumela yethimba, ukuqoshwa kwezingcingo, nokushaya ucingo ukulalela kanye namandla wokuthekelisa.
Phendula amathuluzi wokuthuthukisa - Shintsha imilayezo yakho ukuze ufinyelele ekusebenzeni okuphezulu - Impendulo inesethi yamathuluzi okuthuthuka ukukusiza ukuthi uthole imiphumela engcono, kufaka phakathi ikhwalithi ye-imeyili, ukuhlolwa kwe-A / B, izifanekiso zokulandelana, kanye namashejuli wokuthumela ibhokisi lokuthumela ngaphandle.
Thola iDemo Yempendulo
Ukudalula: Sisebenzisa ifayela le- Phendula isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: shayela ukufinyelelai-clearbitcontactcloudithusi crmidathanyzeusesho lwe-imeyiliukuqinisekiswa kwe-imeyiliOkugcweleUkuxhumanaindawoLinkedInukuxhumana kwe-linkedinmadkuduukumaketha okungaphandleukuthengisa okuphumayoisikhovauphenduleukuphathwa kokuxhumana nokuthengisaukuzibandakanya kokuthengisaipulatifomu yokubandakanya abathengisiukufinyelela ekuthengiseniyokubika yokuthengisasalesforcezapperzoomfo